टिकटकबाट कसरी पैसा कमाउने ? ( जान्नुहोस् ) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/टिकटकबाट कसरी पैसा कमाउने ? ( जान्नुहोस् )
काठमाडौं १२ असार / मुस्कान : पछिल्लो समय निकैनै लोकप्रिय बनेको भिडियो एप ‘टिकटक’ले युवापुस्ता देखि वृद्ध वृद्धालाई आकर्षित गरेको छ । छोटो भिडियो निर्माण गरेर आफ्नो प्रतिभालाई समुदायमा देखाउन सकिने टिकटकलाई धेरैले मनोरञ्जनको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
त्यस्तै टिकटकको प्रयोगकर्ता नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लोसमय टिकटकबाटै आफ्नो पहिचान बनाएर सेलिब्रेटी बन्ने पनि लहर चलेको छ नेपालमा ।
धेरै टिकटक प्रयोगकर्तालाई यसबाट पैसापनि कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन होला । तर, पछिल्लो समय टिकटक मनोरञ्जनको लागि मात्र नभई पैसा कमाउन सकिने माध्यम पनि बनेको छ ।
टिकटकमा लाइभ गर्दा हेर्ने दर्शकहरुले इमोजी उडाउने र गिफ्ट फठाउन मिल्ने छ । गिफ्ट पठाउनलाई क्वाइन किन्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि गिफ्ट किनेर पठाउन सकिनेछ र अरुले पठाएको गीफ्ट बापत लाइभ गर्ने ब्यक्तिको खातामा पैसा आइरहेको हुन्छ । तर गिफ्ट किनेर पठाउने सुविधा नेपालमा भने हालै उपलब्ध छैन अन्य देशहरुबाट पठाएको गिफ्ट बराबरको रकम भने प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
गिफ्ट किन्नको लागि यसरी क्वाइन लिनु पर्नेछ ।
यसरी पैसा कमाउन नेपालमा धेरैले सुरु गरिसकेका छन् । केहिसमय अगाडि चर्चित टिकटक प्रयोगकर्ता सिर्जन कुमार भट्टराईले टिकटकबाट जम्मा भएको १ लाख ६० हजार र बुद्ध बालक समुहबाट ४० हजार थपेर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई सहयोग गरेका थिए ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्दै सिर्जन भट्टराई ।
सिर्जन भट्टराई दैनिक बिहान दुई देखि ३ घन्टासम्म टिकटकमा लाइभमा बस्छन् । भट्टराई भन्छन् : “देशबाहिर रहेका टिकटक प्रयोगकर्ताहरुले माया गरेर पठाएको गिफ्ट बापत संकलन भएको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नेछुँ ।”